Books | Dhamma Training Center
လောကမှာ သီလကို မမြတ်နိုးတဲ့သူကသီလမြတ်နိုးတဲ့သူရဲ့ အပြုအမူ အနေအထိုင် အပြောအဆိုကို မနှစ်သက်နိုင်ပါဘူး။ အားလည်း မပေးကြပါဘူး။ ထိုနည်းတူပဲ လောကမှာ အသိဉာဏ် ပညာ နည်းပါးတဲ့သူကလည်း အသိပညာကြီးမားတဲ့သူရဲ့ စကားကို နာယူစိတ် နည်းပါးတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းပဲ စိတ်နှလုံး မပြည့်ဝတဲ့ သူကလည်းပဲ စိတ်နှလုံးကောင်းပြီး သဘောထားကြီးသူရဲ့ အပြုအမူ အပြောအဆို အနေအထိုင် အကြံပြုမှုကို နားလည်ခဲပါတယ်။ သဘောကျခဲပါတယ်။...
ရာဂ ကုန်ရာ ဒေါသ ကုန်ရာ မောဟ ကုန်ရာကို နိဗ္ဗာန် ဟုခေါ်သည်။ Download Now...
သမုဒ္ဒရာကြီးသည် ကမ်းမမြင်၊ လမ်းမမြင် အလွန်ကျယ်ပြန့်၏။ အလွန်နက်ရှိုင်း၏။ ထိုနည်းအတူ ပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးသည်လည်း အလွန်ကျယ်ပြန့်၏။ အလွန်နက်ရှိုင်း၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးသည်လည်း အလွန်ကြီးကျယ်၊ အလွန်နက်ရှိုင်းသောကြောင့် “ဉာဏသာဂရ” မည်ပေသည်။ Download Now...
ကာမဂုဏ်တို့သည် မဆုံးနိုင်လောက်အောင် များပြားသော အပြစ်ရှိကုန်၏။ များသောဆင်းရဲရှိကုန်၏။ ပြင်းသော အဆိပ်နှင့်တူကုန်၏။ (ဓားသွားဖျား၌ တည်သော ပျားရည်ကဲ့သို့ ) သာယာမှုနည်းပါးကုန်၏။ ပြင်းစွာတပ်စွန်းမှု ရာဂစသော ကိလေသာကို ပွားစေတတ်ကုန်၏။ ဖြူစင်သော ကုသိုလ်အဖို့ကို ခြောက်ကပ်စေတတ်ကုန်၏။ Download Now...
If we practice vipassanā satiptthāna, Will it be beneficial to us in this life? Will it bring benefits to us in this life? Download Now...
ကာမဂုဏ် စသည်တို့ကို ကြံစည်ခြင်းဖြင့်သာ အချိန်ကုန်လွန်စေ၍ ပေါ့တန်ပျင်းရိ၊ လုံ့လမရှိသူ၏ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ အသက်ရှင်ရသည်ထက် ကိလေသာငြိမ်းအေးရန် ခိုင်မြဲစွဲ အားထုတ်နေသူ၏ တစ်နေ့ တစ်ရက် တစ်နံနက်မျှ အသက်ရှင်နေရခြင်းက ပိုလွန် မြင့်မြ တ် လှ ပေသည်။ Download Now...
လူ့ဘ၀ နေ့စဉ် လုပ်ငန်းဆောင်တာ ဆောင်ရွက်ရာ၌ မ မေ့မ လျှော့ သတိဖြင့် နေထိုင်ပြုမူသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု ပြည့်ဝခြင်း၊ တိကျခိုင်မာသော ဘ၀ရည်မှန်းချက်များ ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် သူတစ်ပါးထက် လျှင်မြန်စွာ အောင်မြင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ Download Now...
နေထွက်လာဖို့ရာ ရှေ့ပြေးနိမိတ်က အရုဏ်တက်ခြင်းပါပဲ။ တရားပြည့်စုံဖို့ရာ မှာလည်း ရှေ့ပြေးနိမိတ်က ကလျာဏမိတ္တ မိတ်ကောင်း၊ ဆွေကောင်း ဆရာသမား ကောင်းနှင့် တွေ့ဖို့ပါပဲ။ Download Now...
ရဟန်းနှင့်သိမ် သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းတော်ဟူသည် သိမ်အတွ​င်းမှသာ ဖြစ်ခွင့်ရှိပါသည်။ သိမ်ရှိသော်လည်း သိမ်မ အောင်လျှင်မူ ထိုသိမ်မှ ရဟန်းမဖြစ်လာနိုင်တော့ပေ။ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းအစစ်များ မရှိတော့ခြင်းသည် သာသနာဆိတ်သုဉ်းခြင်းပင် ဖြစ် ပေ တော့သည်။ Download Now...
တောရမြိုင်ပျော် ထေရ်ဘုန်းမော်အား ရှင်တော်ဗုဒ္ဓ မိန့်ဟ လေ ချို့ သော်ကုန်စင် နက္ခတ်သင် ရပ်ခွင်ကြည့်တော့ သိတော့လေ။ အရှင်ခေမာနန္ဒ(ဗြာဟ္မဏ) Download Now...
ရဟန်းချမ်းသာ ရွှေငွေစပါး သိမ်းထားမလို အပြစ်ကင်းငြား ဆွမ်းများရှာဆို ။ ဆွမ်းကို ဘုဉ်းပေး ငြိမ်းအေးသကို မင်းဒုက္ခ မုချ လွတ်ကင်းဆို။ ပစ္စည်းမမက် ကိုယ့် တွက်မလို ခိုးသူရန်ဘေး ကင်းဝေးသကို၊ လူရှင် မ ရောစိတ်ဇောအေးပို...
ရဟန်းတို့…ဤသာသနာတော်၌ အားထုတ်နေသော ရဟန်းသည် တပ်မက်မှုနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်ကိုမူလည်း တပ်မက်မှုနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်ဟူ၍ သိ၏။ တပ်မက်မှု ကင်းသောစိတ်ကိုမူလည်း တပ်မက်မှုကင်းသောစိတ်ဟူ၍ သိ၏။ Download Now...
နေမင်းသည် နေ့အခါ၌သာ တောက်ပ၏။ လမင်းသည် ညအခါ၌သာ တောက်ပ၏။ ရှင်ဘုရင်သည် မင်းမြှောက်တန်ဆာ ဆင်ယင်ထားမှသာ တောက်ပ၏။ ရဟန္တာသည် ဈာန်ဝင်စားနေမှသာ တောက်ပ၏။ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ကား နေ့ ရောညပါ...
အိုးမဖုတ်ခင်၊ အိုးလုပ်စဉ်ဝယ် အိုးတွင်နှိပ်ခတ်၊ တံဆိပ်မှတ်ကား မပြတ်မစဲ၊ အိုးပင်ကွဲလည်း အမြဲတစေ၊ တည်ရှိနေသို့ ထွေထွေသွေးသား၊ ကလေးများ၌ ဘုရားတံဆိပ်၊ ဘာသာစိတ်ကို ခတ်နှိပ်နိုင်မှ၊ သက်ဆုံးကျအောင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ၊ စွဲ၍တည်မည် ကိုယ်စီ ခတ်နှိပ်စေသတည်း အမရပူရမြို့၊ မဟာဂန္ဓာရုံ ဆရာတော်ဘုရားကြီး Download Now...
မြူတမျှသော ကိလေသာရဲ့ လှည့်စားမှုက သံသရာကို တစ်နံတစ်လျားထိ ရှည်လျားသွားစေ နိုင်ပါတယ်။ Download Now...
တပည့်တော်တို့ ရဟန်းတွေဆိုတာဟာ အနေရိုးသားရမယ်။ အသိဉာဏ်ဘက်ကျတော့ ဆန်းကြယ်စေရမယ်။ လူများနဲ့ ရောရောနှောနှောလည်း မနေရဘူး။ ကင်းနိုင်သမျှ ကင်းအောင် နေရမယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နဲ့လုံးဝ မဆက်ဆံဘဲ နေလို့လည်း မဖြစ်ဘူး။ အသင့်အတင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတော့ ရှိရမယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာလည်း ငါရဟန်းဆိုတဲ့ သမဏ သညာကို ပျောက်မသွားစေရဘူး။ ကျေးဇူးရှင် ဒသမရွှေကျင် သာသနာပိုင် မြောင်းမြ...
ရန်ကင်းတောရက အရင်ဘုန်းကြီးတွေလည်း ငွေမကိုင်ကြဘူး။ ခုဘုန်းကြီးတွေလည်း ငွေမကိုင်ကြနဲ့။ ဒါဆိုရင် ရှေးဘုန်းကြီးနှင့် ခုဘုန်းကြီး တူသွားပြီ။ ဒါသြ၀ါဒပဲ။ ကျေးဇူးရှင် နဘူးကျင်း ဆရာတော် ဘုရားကြီး။ Download Now...
စဉ်းစား တွေးတော ကြံဆနေတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ရုတ်တရက် ဘယ်ဆီကမှန်းမသိ၊ ဘယ်လိုမှန်း မသိဘဲ ပြဿ နာရဲ့ အဖြေရလာတတ်တဲ့ စိတ်ကူးကောင်းကို အနောက်ပိုင်း ပညာရှင်တွေကတော့ ဆဋ္ဌမအာရုံကို Sixth Sense လို့ အမည်ပေးကြပါတယ်။ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဆိုတာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာ မျိးလဲ? ဒါကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်လို့ကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား? လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ ပျိုးထောင်ရမှာလဲ? ဆိုတာကို...
ပညတ်က သမထရဲ့ အာရုံဖြစ်တယ် ပရမတ်က ၀ိပဿ နာရဲ့ အာရုံဖြစ်တယ် ပညတ်မှာ ဖြစ်ပျက် ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ သဘောတရား မရှိဘူး မောင်ကျောင်းသား Download Now ...
မနက်မိ်ုးလင်းလျှင်သွားမည့် ခရီးတိုလေးအတွက် ညဦးကပင် သတိတရ အစစအရာရာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ရှိသော လူသားများသည် တစ်ဘ၀တာကို အပြီးတိုင်စွန့်၍ မပြန်လမ်းသို့ သွားရောက်ရမည့် မရဏခရီးစဉ်အတွက်မူ အဘယ်ကြောင့် မပြင်မဆင်ဘဲ တွေဝေကာ သတိမေ့လျော့ လျက် နေကြပါသနည်း? အဘယ်ကြောင့် ရင်ဆိုင်ရန် မပြင်ဆင်ကြပါသနည်း အဘယ်ကြောင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် နှောင့်နှေးနေရပါသနည်း? Download Now ...
အိုးမဖုတ်ခင်၊ အိုးလုပ်စဉ်ဝယ် အိုးတွင်နှိပ်ခတ်၊ တံဆိပ်မှတ်ကား မပြတ်မစဲ၊ အိုးပင်ကွဲလည်း အမြဲတစေ၊ တည်ရှိနေသို့ ထွေထွေသွေးသား၊ ကလေးများ၌ ဘုရားတံဆိပ်၊ ဘာသာစိတ်ကို ခတ်နှိပ်နိုင်မှ၊ သက်ဆုံးကျအောင် ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ၊ စွဲ၍တည်မည် ကိုယ်စီ ခတ်နှိပ်စေသတည်း။ Download Now...
ချစ်ခင်စုံမက် စွဲလမ်းနှစ်သက်ဖွယ် ဟူသရွေ့နှင့် နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာတော့ မုချ ကွေကွင်း ကြရမှာပဲလို့ ငါပြောပေါင်း များလှပြီ အာနန္ဒာ မြဲတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး Download Now ...
ချစ်ခင်စုံမတ် စွဲလန်းနှစ်သက်ဖွယ် ဟူသရွေ့နှင့် နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာတော့ မုချကွေကွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ သဘာဝသဘောတရားကြီးကို သဘောကျ လက်ခံလာနိုင်ပါ ပြီဘုရား။ Download Now...
ကမ္ဘာ့ လူသားအများစု စိတ်ဝင်တစားမေးနေကြတဲ့ Daily Life Vipassana ဆိုင်ရာ မေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကို ဖြေကြားပေးဖို့ ဒီစာအုပ်က အတတ်ကနိုင်ဆုံး ကြိုးစားထားပါတယ်။ Download Here...
လူငယ်များအတွက် အိမ်၌ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ကျောင်း၌ယဉ်ကျေးခြင်း၊ လမ်း၌ ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ကစားစဉ်၌ ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ကစားစဉ်၌ ယဉ်ကျေးခြင်း၊ ခရီးသွားစဉ်၌ ယဉ်ကျေးခြင်းနှင့် အထွေထွေ ယဉ်ကျေးခြင်း၏ အဖွင့်သင်ခန်းစာများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤသင်ခန်းစာများကို သင်ကြားစေခြင်းဖြင့် ကလေးများ အနာဂတ်တွင်သာမက ယခု ပစ္စုပ္ပန်မှာပါ သိသိသာသာ လိမ္မာယဉ်ကျေးလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ Download Now...
ကလေးကစားစရာ အရုပ်ကျကွဲတဲ့အခါ ကလေးကငိုတယ်၊ လူကြီးကမငိုဘူး လူကြီး ဘာကြောင့်မငိုတာလဲ လူကြီးကသိလို့ပါ။ ကလေး ဘာကြောင့်ငိုတာလဲ ကလေးကမသိလို့ပါ သည်ခန္ဓာငါးပါး အစုအဖွဲ့ဟာ အိုတတ်တယ်၊ နာတတ်တယ်၊ သေတတ်တယ် ဆိုတာကို သိတော်မူတဲ့ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ အသိဟာ လူကြီးအသိပါ။ ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ အသိဟာ ကလေးအသိမျိုးပါ။ Download Now...
အမှန်တရားဟူသည် ပရမတ္ထတရားမှတစ်ပါး လောက၌ အခြားမရှိပေ။ ထိုအမှန်တရားကို ဖည်းပူးရှားမှီး နေခြင်းသည် လူ့ဘဝ၏ အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ Download Now...
ကလေးငယ်များအား CCA သင်ကြားနည်းအတွက် အထောက်အကူပြုစေရန်။ Download here...
ကလေးငယ်များကို သဘာဝအလှကိုခံစားစေခြင်းဟာလည်း စိတ်ကို ပြုပြင်နည်းတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့် ကလေးငယ်များကို အထောက်အကူပြုစေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ သင်ကြားနည်းစနစ်ကို အထောက်အကူပြုစေရန်လည်းကောင်း စီစဉ်ထားသောစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ Download here...
အစဉ်အလာအတိုင်း မိမိတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျင့်သုံးလာခဲ့သည့် သင်ကြားနည်းစနစ်ကို ဆရာ ဗဟိုပြုသင် ကြားနည်း (Teacher-Centred Learning) ဟူ၍ ခေါ်ဆိုပါသည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာတဝန်း ပညာရေး ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၊ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများက စိတ်ဝန်စားနေကြသည့် ကျောင်းသာဗဟိုပြု သင်ယူမှုစနစ် (Student-Centred Learning) ဟုခေါ်ဆိုပါသည်။ ကလေးဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်နည်း (Child-Centred Approach) (CCA) ဟူ၍လည်း ...